Kaddib Iscasilaaddii Zinedine Zidane, Liiska Tababareyaasha Ay Real Madrid Isha Ku Hayso – Cadalool | Shabakada Wararka Ciyaaraha
HomeChampions LeagueKaddib Iscasilaaddii Zinedine Zidane, Liiska Tababareyaasha Ay Real Madrid Isha Ku Hayso
Kaddib Iscasilaaddii Zinedine Zidane, Liiska Tababareyaasha Ay Real Madrid Isha Ku Hayso
31/05/2018 Abdiwahab Ahmed
Tababarihii kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa si lama filaan ah ugu dhowaaqay inuu iska casilay shaqada tababarenimo ee Real Madrid oo uu soo hayey saddexdii sannadood ee ugu dambeeyey.
Zidane oo saddex Champions League oo isku xigta u qaaday Real Madrid muddadii saddexda sannadood ahayd ee uu joogay ayaa mar kaliya ku wargeliyey madaxda iyo ciyaartoyga kooxda inuu shaqada ka tegay, isla markaana ay tahay xilligii ku habboonaa ee isbeddel dhici lahaa.
Zidane oo koobkii u horreeyey ee Champions League xili ciyaareedkii 2015/16 rikoodheyaal kaga qaaday Atletico Madrid ayaa sannadkii xigayna Juventus ku dardaray 4-1 ka hor intii aanu toddobaadkii hore 3-1 Liverpool kaga qaadin koobkiisii saddexaad ee Champions League ah.
Warka dhiillada leh ee iscasilaadda Zidane ayaa waxa uu keenay in warbaahintu ay markiiba soo dhigto liiska tababareyaasha suurtogalka ah ee ay Real Madrid indhaha ku hayso, kuwaas oo ay suurtogal tahay inay keento.
Antonio Conte: Tababaraha Talyaaniga ah ayaa la filayaa inuu iska casilo Chelsea maalmaha soo socda, kaddib laba sannadood oo culays iyo canaan badan ku dhacday, waxaana uu hadda yahay murashax ka mid ah ragga la filayo inay la wareegaan shaqada uu iska casilay tababare Zinedine Zidane.
Maricio Pochettino: Tababaraha kooxda kubadda cagta Tottenham guusha gaadhsiiyey sannadihii u dambeeyey, kana dhigay naadi boosaska ugu sarreeya ku tartamaysa ayaa in muddo ah lala xidhiidhinayey Real Madrid. Wakhtigii culayska badan saarnaa Zidane ee Real Madrid ay ku adkaatay guushu, ayaa la wariyey in Pochettino uu ogol yahay inuu la wareego shaqada culayska badan ee Madrid.
Arsene Wenger: Macallinkii dhowaan ka tegay Arsenal ee Wenger ayaa la wariyey inuu ku jiro liiska tababareyaasha ay Real Madrid doonayso, waxaana uu wakhtigan yahay shakhsi xor ah oo aan kooxdna heshiis kula jirin.
Guti: Xiddigii hore ee khadka dhexe ee Real Madrid, Guti ayaa si lama filaan ah u noqon karaya tababaraha cusub ee Real Madrid isagoo wakhtigan ah macallinka kooxda da’yarta, halkaas oo uu kusii wareejin doono Raul oo isna ka mid ah ragga loo carbinayo inay mustaqbalka tababaraan Real Madrid.
Jurgen Klopp: Tababaraha Liverpool ayaa muddo dheer ay Real Madrid daba socotay, waxaana ka hor intii aan la magacaabin Zidane loo arkayey shakhsiga maamuli doona Real Madrid, hase yeeshee, shaqada fiican ee uu wakhtigan ka hayo Liverpool ayaan la ogeyn go’aanka uu ka qaadan doono.
Joachim Low: Macallinka xulka qaranka Jarmalka ayaa kusoo baxay liiska murashaxiinta Real Madrid, waxaana ay xaqiiqadu tahay in muddo badan ay Los Blancos la dhacsanayd shaqada uu ka qabtay qaranka Jarmalka, siyaasadda uu ciyaaryahannada kula dhaqmo iyo akhlaaqdiisa suuban.
Maxi Allegri: Tababaraha kooxda Juventus waxa hore loola xidhiidhinayey Chelsea, hase yeeshee shaqada ka bannaanatay Real Madrid ayaa u furtay il kale oo uu shaqo wanaagsan ka heli karo.
Jose Mourinho: Liiska ay warbaahintu saadaalinayso waxa ku jira tababaraha Manchester United, Jose Mourinho oo sannadkii 2013 laga caydhiyey Real Madrid.